[Official] dr.fone - A Toolkit yezinhlelo Zonke iOS & Android Abasebenzisi
izinkinga Mobile, amathuluzi ukuzixazulula.
Zonke amathuluzi owadingayo ukuze ugcine nokugijima yakho ephathekayo at 100%.
Uzame mahhala Kuzame mahhala
iOS iOS Screen mibhalo
iOS LINE Idatha Isipele nokubuyisela esimweni
iOS Kik Idatha Isipele nokubuyisela esimweni
iOS Viber Idatha Isipele nokubuyisela esimweni
Android Data Isisuli
Amakhasimende ethu abathanda dr.fone
Uhlelo Omkhulu! Omkhulu Service kwamakhasimende!
ngu Juan Carlos F, i-iOS
Enginakho isofthiwe ephukile-Android yokutakula idatha isikhashana manje futhi belisebenzisa ku ehhovisi amafoni ahlukahlukene. Ngeke ukukholelwe ukuthi bangaki amafoni get sephulwe njalo ngemva kwesonto. Lokhu kusiza ngempela ukuthola amaklayenti imininingwane nezincwadi ezibalulekile kusukela kumadivayisi wabo.
ngu Setcom team IT, Android
isofthiwe Kuhle ye-iOS
ngu Tyrone Williams, iOS
dr.fone yamathuluzi - umkhiqizo Android Data Recovery
Dr.Fone ingumkhiqizo zakamuva ngiyaphupha wadala, sahlulwa, Ungalokothi wacabanga off, imibono ezimangalisayo, trully okukhulu. Lokhu ungase uthi, Dr.Fone kwashintsha umlando we-Android ngokwayo ibe brand new ubuso. Dr.Fone isebenza kuzo zonke izinhlobo ubuchwepheshe, amadivayisi ngisho kwesokudla phansi kuya kulencane chip micro. Kuyobahambela izwe emhlabeni kwabantu abaningi kangaka, izimpaphe elisha elimangalisayo, hhayi lokho kuphela, kanjani ungenza konke futhi noma yini. noma yini kanye Nokho. Kuyinto namandla ukuba.
ngu Gerard Katu,-Android
Ngacabanga lwami obelungilahlekele madodakazi ami amnandi 16 lokuzalwa izithombe namavidiyo phakade. Le software ukulondolozwa ingqondo yami !! Uma kwakuba khona ukukala ephakeme, dr ezimhloshana nakanjani kube nguwe umuntu uthole yona. Futhi angikaze ngilithole yini kwangenza ngaba nomuzwa wokuthi indlela phambi. Ngaze ngaya ngisho inthanethi beyofuna ikhodi isigqebhezana ngoba izimali zami wawuphansi kangangokuba mina couldn''t okukwenza futhi kwaba cishe ngo izinyembezi kwaze kwaba yilapho ngithola enye futhi ngiyitholile elihle ngemali engaphansi ngengxenye !! Ngiyabonga dr.fone !!